Keymagic အတွင်း Keyboard လက်ကွက်ထည့်သွင်းနည်း – Myanmar Unicode® Migration
Myanmar Unicode® Migration
See with Unicode
Keymagic အတွင်း Keyboard လက်ကွက်ထည့်သွင်းနည်း
Myanmar Unicode တွင် keyboard လက်ကွက်များစွာရှိရာ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာ keyboard လက်ကွက်ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။လက်ကွက်များစွာထဲမှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ လက်ကွက်ကို အချိန်တိုအတွင်း လက်ကွက်တစ်ခုမှ အခြားလက်ကွက်တစ်ခုသို့ လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ရန် keymagic အတွင်းမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ လက်ကွက်များကို ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
Pyidaungsu MM Keyboard ကိုနမူနာအဖြစ်ထည့်သွင်းရှင်းပြထားပါသည်။အခြားသောလက်ကွက်များကိုလည်းဤနည်းအတိုင်းထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Pyidaungsu MM [Download not found]
ပြီးရင် Add button အား တစ်ချက်နိုပ်ပါ။
Windows Explorer ပေါ်လာပြီဆိုပါကဒေါင်းလုဒ်ရယူထားသော Keyboard လက်ကွက် ( Pyidaungsu MM.km2 ) ကိုမိမိဒေါင်းလုဒ်ချခဲ့သောနေရာတွင်ရှာဖွေရမည်။
အဆင့် ( ၅ )
ဒေါင်းလုဒ်ရယူထားသော Keyboard လက်ကွက် ( Pyidaungsu MM.km2 ) ကိုတွေ့ပြီဆိုပါကအောက်ပါပုံအတိုင်းအဆိုပါ ( Pyidaungsu MM.km2 ) ကိုထောက်၍ တစ်ချက်နိုပ်ပြီး Open button ကိုတစ်ချက်နိုပ်ပါ။ဒီလိုဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
One thought on “Keymagic အတွင်း Keyboard လက်ကွက်ထည့်သွင်းနည်း”
Pingback: Keymagic ထညျ့သှငျးနညျး – Unicode Today
Windows 10 Keyboard
Unicode isaregistered trademark of Unicode, Inc. in the United States and other countries. This site is not in any way associated with or endorsed or sponsored by Unicode, Inc. (aka The Unicode Consortium).
Our Organiztion - Myanmar Computer Federation (MCF) is the official federation - umbrella organization of all official computer-related associations, working groups, technical committees in the Republic of the Union of Myanmar. Address: 9/1 Myanmar ICT Park, Hlaing Campus, Yangon 11052, Myanmar.